Is Casilaada Jawaari haday dhab noqoto Maxaa kadhalan karra ? (dhegayso) – Radio Daljir
Abriil 9, 2018 6:48 g 0
Golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa hareeyey khilaaf ka dhashay mowshin laga soo gudbiyay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya,. waxaana uu hakad geliyay khilaafka howlihii xukuumadda.
Guddoomiye kuxigeenka koowaad ee baarlamaanka ayaa ka sheegay kulan kadhacay Muqdisho oo ay yeesheen baarlamaanka inuu iscasilay guddoomiyihii baarlamaanka, inkastoo warkaasi wali aan laga hayn guddoomiyaha baarlamaanka, haddaba haddii uu warkaasi rumoowo mxuu isbadal ah uu ku keeni karaa howlihii xukuumadda faderaalka iyo baarlamaanka.
Prof Cabdiwali Cabdiraxmaan Gayre ayaan arimahaasi wax ka waydiinay